musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies Melinda Anokanganisa Hutano hweVanoda Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography inopa yakazara yakazara yeMelinda Gates Yehudiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu hwemhuri, Kufambidzana Nhoroondo, Kuroora, Hupenyu hweMunhu neHupenyu. Kuongorora kwakazara kwezviitiko zvinoshamisa kutanga kubva pahudiki hwake mazuva kusvika paakazova Mukurumbira.
Melinda Anopa Hupenyu Nhau- Iyo Untold Biography. 📷: Cbsnews, Huffpost, Inet, uye Dailymail
Ehe, isu tese tinoziva kuti iye mukadzi wemumwe we varume vakapfuma kwazvo pasi pano. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveMelinda Gates's biography, iyo inoshamisa. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Melinda Anotamba Nyaya dzeChidiki:
Melinda Ann Gates akazvarwa musi wa15 Nyamavhuvhu 1964 kuna amai vake, Elaine Agnes Amerland, uye baba vake, Raymond Joseph French Jr., injinjini yemhepo kuDallas, Texas. Iye ndiye wechipiri wevana vana akaberekwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Mumazuva ake ehudiki, Melinda aive mwana akangwara aigona kukurumidza kugadzirisa matambudziko akazova akaomera vezera rake group. Kare ikako, aigara akagadzirira kudzidza zvinhu zvitsva. Nenguva isipi akakurisa toni yezivo musainzi sainzi pazera nyoro.
Melinda Gates Mhuri Yemashure:
Imwe yemubhedha yakasimudzira tarenda ratinoona kuna Melinda nhasi ndiko kusimudza kwake. Mhuri yekwaMelinda Gates yemhuri yakanganisa zvakanyanya chikoro chake chepfungwa muzvikamu zvakawanda zvehupenyu hwake hwebhizinesi.
Sezvo akaberekerwa mumhuri yepakati-kati, Melinda akadzidza zvakawanda kubva kuna baba vake, avo panguva iyoyo vaive injinjini. Uyezve, akazosvika pakunzwisisa nheyo dzekutarisira imba apa achiita mamwe mabasa epamba. Nguva yekuwedzera iyo yechidiki yeAmerica yakawana ruzivo rwakawanda pamaitiro ekugadzirisa zviwanikwa kumba. Nhasi, iwe unogona kuona kuti anoshanda zvakanaka sei bhizinesi rake kuedza.
Melinda Anotamba Nyaya dzeUdiki- Upenyu hwepakutanga:
Akarererwa paakazvarwa pamwe chete nasisi vake mukuru pamwe nemadzikoma maviri. Kukura muDallas, Melinda aive mwana aifara aisanyanyo hanya nezvinhu zve trivia asi akapa zvakanyanya kutarisana nematambudziko akaomarara.
Hupenyu hwakanga huchiwedzera kunakidza sezvo achiwana hanya yakakwana kubva kuna baba vake, avo vaigara vachimudzidzisa pane mamwe matambudziko arithmetic. Kuwedzera pakuvhima kwake ruzivo muhupenyu hwake hwepakutanga, Melinda aive musikana wechurch kumashure mumazuva. Hongu! akarererwa mukutenda kwechechi yeRoma uye aigara achigadzira nguva yekuenda kumisangano nezvimwe zviitiko zvechechi mushure mekuchikoro.
Melinda Anopa Nyaya Dzehudiki- Dzidzo Yashure uye Basa Rinovaka.
Melinda akanyoreswa kudzidza kuSt Monica Catholic School, kwaakapedza kudzidza semudzidzi wepamusoro wekirasi yake. Wazvinzwa izvo, mudzidzi akanakisa! Aive asiri akangwara chete; pachinzvimbo, iye aive ane hunyanzvi uye ane hunyanzvi.
Tarisa uone kabhuku kake kadiki. Unogona kumuona here? 📷: cbsnews
Kukura kwakaita Melinda nguva yake mukufunda kunoita kuti iwe ugoda kubheja pane kubudirira kwake mune ramangwana. Pakazosvika makore gumi nematanhatu, akagadziriswa kuApple II nababa vake. Nenguva isipi akatanga kufarira mitambo yemakomputa uye mutauro weBASIC unoronga.
Melinda Anopa Hupenyu hweNhau- Yekutanga Basa Rehupenyu:
MaGeniuses anowanzo hukama nemakomputa geeks. Nokukurumidza Melinda akaonesa iyi dzidziso yekurudyi uye akaenderera kunotora bachelor's degree mune zvesainzi zvekomputa uye zvehupfumi kubva kuDuke University mugore ra1986.
Kusarudzika kwake kwakamuwanira rombo rekunopa hurukuro yekupedza kudzidza paDuke University. 📷: Mestestate.
Mumazuva ake ekuyunivhesiti, akazova nhengo yeKappa Alpha Theta sorority, Beta Rho Chitsauko. Paaigadzirira kuputika muhupenyu hwake hwebasa, Melinda akawana MBA paDuke's Fuqua School of Business muna1987.
Melinda Gates Biography- Nzira inoenda Mukurumbira Nyaya:
Vanhu vazhinji havana ruzivo rwekuti Melinda akazvipira uye akasimba mukuita kwaakaita mazuva ese kuUniversity. Zvese zvaakakwanisa kuona kutsvinya nyoro kwenyaya yake yekubudirira pakupera kwezvibayiro zvake uye kusimba mukudzidza.
Melinda haana kumboregeredza chero mukana uno unozviratidza wega mushure mekupedza kwake kudzidza. Akatanga basa rake semasvomhu uye epurogiramu yekugadzira makombiyuta kuvana. Wow! Inzwa yakadii yaanosvika ipapo. Vanhu vazhinji vangangoramba musangano wakadaro nepfungwa iyo kuti isingaenderane nezvinodiwa zvavo. Asi, heck! Akatora basa racho zvakadaro.
Melinda Gates Biography- Simuka kune Mukurumbira Nyaya:
Pasina kupera nguva refu mushure mekushanda semurairidzi, Melinda akawana basa idzva kuMicrosoft uye akatanga kushanda semaneja wekushambadzira. Iye aive nebasa rekutungamira kugadzirwa kwezvemedia multimedia zvigadzirwa.
Kupenya kwe ID yake kadhi apo ichishanda kuMicrosoft. 📷: yemazuva ese
Portfolio yake yakaramba ichivandudzika paakakwira kumusoro kweyeManeja Mukuru weRuzivo Zvigadzirwa kuMicrosoft. Kuita kwake nguva yakawandisa kwakamuwanisa kuzivikanwa uye mibairo yakawanda pasi rose.
Akapihwa mubairo wePasirose Hutungamiri muPasi rose muna 2011. 📷: jhsph
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora Melinda Gates Biography, iye zvino ari mukurumbira pasi rose munhu akashanda nesimba kuti asvike padanho rekubhuroka kwemari yaari kuwana nhasi.
Muna 2014, Bill naMelinda vakapa US $ 28 billion dollars yavo. Rinenge gore mushure maizvozvo, Melinda akatanga Pivotal Ventures sesangano rakazvimiririra iro rakazvimiririra neSangano rake. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Melinda Anofarira Nyaya Yerudo:
Kuve mukadzi ane simba uye akapfuma, kubvunza kwakawanda kwakaitwa nezverudo rwaMelinda Gates-rarama. Pazasi pane mhinduro dzemibvunzo inowanzozivikanwa ine chekuita nehupenyu hwaMelinda hwekufambidzana.
Melinda Gates 'mukomana waani?
Imwe yeruzivo iyo isingawanzo kuwanikwa pawebhu ndeye yaMelinda Gates 'akadanana kare. Maitiro ake ekufambidzana anoita kunge ari kunongedzera kuchokwadi chekuti haana kumbobvira ave nemukomana asati asangana naBill Gates.
Nekudaro, mubhuku rake rine musoro; Iyo Moment yeLift: Mashandiro aVakadzi Vanoshandura Nyika, Melinda akataura nezve hukama hwake hwekare. Muzvinabhizinesi akataura kuti akamboita hupombwe asati asangana nemumiriri wenyika anozivikanwa zvikuru. Kunyangwe iye akange asina kutaura kumunhu nezve chiitiko ichi, iye, zvisinei, akazivisa muchidimbu mamiriro ezvinhu mubhuku rake.
Melinda Gates akatanga kuburitsa bhuku rekuvhara. 📷: goodreads
Maitiro aMelinda Bill Bill Gates- Iyo Nyaya yeRudo:
Akasangana nemurume wake, Bill Gates pamutambo wekutengeserana muNew York mushure maizvozvo ivo vakatanga kufambidzana muna 1987. Imwe nyaya yavo yerudo isati yatanga, Melinda akange agara nehukama hwevashandi vehukama naBill Gates.
Varoora mabhiriyoni. Wona kunyemwerera kwaanoita pamwe nemurume wake, Bill Gates. 📷: CNBC
Muchato waBill naMelinda Gates:
Mushure memakore manomwe ekudanana, shiri mbiri dzerudo dzakasarudza kusunga pfundo mumutambo wakasarudzika wakaitirwa muLanai Hawaii. Izvo zvese zvakaitika paZuva reGore Nyowani 7. Pakati pezvakaitika zvese pazuva ravo remuchato, favour yaive nguva yekucheka keke.
Bill akafunga kuti akagadzirirwa kucheka chidimbu kune wese munhu uye akaita zvimwe zvinoshamisa nekukurumidza masvomhu kuti anyatso tarisisa kuti rakakura sei rimwe slice rinofanira kunge rakakura. Paakaziva zvaiitika, Melinda akaseka zvakanyanya zvekuti akatadza kutaura. Dzvanya kutamba kaviri kutamba vhidhiyo pazasi.
Kuroora mumwe wevakapfuma kwazvo pasi pano hakuna kumisa Melinda pakuvavarira kuwana hukuru pabasa rake chairo. Kunyangwe akasiya Microsoft akananga kukudza mhuri yake, Melinda munguva pfupi akapokana semunyori muna 2019 nekuburitswa kwebhuku rake; Iyo Moment Yekusimudza: Maitiro Ekupa Vakadzi Simba Sei Nyika.
Melinda Anopa Vana:
Muchato wake kunaBill Gates wakakomborerwa nevana vatatu vakanaka. Iye zvino Melinda ane vanasikana vaviri nemwanakomana. Vana vake nde; Jennifer Katharine Gates (wedangwe mwana), Rory John Gates (mwanakomana wake mumwe chete), naFiebe Adele Gates (mwana wekupedzisira).
Melinda Anopa vana. (LR), Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates, uye Phoebe Adele Gates. 📷: pinterest uye mukurumbira
Melinda Anopa Hupenyu hwemhuri Chokwadi:
Kune mukadzi waBillionaire, kubudirira uye kubudirira zvaigona kuve zvisingaite kana zvisiri zvekutsigirwa nemhuri yake. Muchikamu chino, sezvatinokupa chokwadi chinonakidza nezvaMelinda Gates Vabereki pamwe nenhengo yega yega yehupenyu hwemhuri. Tinotanga naamai vake.
Ona kutaridzika kwemhuri yake. 📷: yemazuva ese
Nezve amai vaMelinda Gates:
Elaine Agnes Amerland amai vaMelinda. Mai vake vaiita zvekumusha uye vaipedza nguva vachichengeta Melinda pamwe nevanin'ina vake. Kana mubvunzo pamusoro pehunhu hwaMelinda unomuka mupfungwa dzako, iwe unofanirwa kusvika pakuziva kuti amai vake ndicho chakavanzika shure kwetsika dzake.
Melinda Gates achimira padivi paamai vake (L) nasekuru vake (R). 📷: huffpost
About Melinda Gates 'Baba:
Raymond Joseph French Jr. ndibaba vaMelinda. Iye aive Aerospace mainjiniya. Kuziva zvizere nezvehungwaru hwemwanasikana wake, Raymond akavimbisa kuti anovhenekera mwana wake nezve zviitiko zvinoenderana nekombuta.
Maizviziva here?… Baba vaMelinda vakatsvakawo zvimwe zviwanikwa zvemari kuti vasvike pane zvinodiwa nemhuri yavo. Akapinda bhizinesi rekurenda sebasa repamhepo kuwedzera kumabasa ake einjiniya.
About Melinda Gates 'siblings:
Melinda Gates ane vakoma vadiki pamwe chete nehanzvadzi mukuru. Zvinoshamisa ndezvekuti, haana kutaura mazita ehama dzake kubva paakasvika mukuremekedza kwemukurumbira. Kunze kwekusava nechokwadi kwese, hama dzaMelinda pamwe nehanzvadzi vangadai vakamutsigira mukuedza kwake.
Melinda Gates 'babamudiki nevanun'una mukuru. 📷: rudo
About Melinda Gates 'hama:
Ruzivo rwasekuru vababa va Melinda, pamwe nasekuru naambuya nasekuru, rwave kuwanikwa pawebhu. Sezvo pasina ruzivo rwunozivikanwa nezve hama dzemurume, zvazove zvisingabviri kuwana data rechokwadi nezve babamunini uye nababamunini.
Ko Melinda Gates anoitei mune yake Yega Nguva?
Kure nezvake zvakawandisa kuita bhizinesi, Melinda Gates akawana mashoma emitambo inonakidza nemaitiro. Anotamba tenisi, pickleball, uye bhodhi mutambo (Settlers of Catan) nemhuri yake yese.
Iye anoda mutambo webhodi (Settlers of Catan). 📷: CNBC
Melinda's persona isanganiswa ye Leo Zodiac maitiro. Iye ane rudo, ane moyo munyoro, uye ane simba, hunhu hwakafanirwa neyake zodiac kusanganisa. Uyezve, kutsunga kwaMelinda pakubatsira vanoshaya anongotsanangudza zvido zvake mukufambisira mberi kusaenzana munyika ino.
Melinda Anosimudzira Maitiro ehupenyu:
Kuroora mumwe wevakapfuma varume vari vapenyu kunoratidza kuti Melinda awana pfuma yakakura. Iye mambure ake akakosheswa kuve anoverengeka madhora zviuru makumi manomwe zvemadhora. Kwakatangira hupfumi hwake kunobva pane rake bhizinesi. Ukatarisa mumararamiro ake, iwe uchaona kuti kunyangwe achishandisa mari paumbozha, ane moyo wakanaka.
Pamusoro peimba yaMelinda:
Muna 2020, Melinda nemurume wake vakatenga imba yakasarudzika yaikosha madhora zviuru makumi mana emadhora. Imba yacho inemakamuri matanhatu ekurara, zvimbudzi zvina, uye akareba makubhiti mashanu, emamirita. Kugara munzvimbo yakanaka kudaro mararamiro akakodzera kumabhiridha. Tarisa uone imba yake iri pazasi.
Imba yakasarudzika yemabhizimusi edu akakurumbira emabhiriyoni.📷: townandcountry
Kunyangwe shiri yerudo yakavhara chikamu chemadhora mazana mana emamiriyoni emadhora muna 43, vaive zvakare nezvivakwa zvakawandisa mune zvavo midziyo. Imwe yemakuru anozivikanwa ndeyaMelinda Gates Mhuri ndeye Xanadu 2020 iyo inosvika mazana matanhatu nemakumi matanhatu emamita mativi. Ichi chivakwa chinofungidzirwa kuti chaikosha madhora gumi nemaviri emamirioni inoratidzirwa pazasi.
Xanadu 2.0 yemhuri yekwaGates. 📷: scoopify
Hapana mubvunzo kuti Melinda ane chikwereti chakati kuti chemotokari yaanoshandisa kune bhizinesi rake pamwe nemabasa ake. Nekudaro, hapasati paine zvinyorwa zvepamutemo zvekuunganidzwa kwemotokari. Ona kutaridzika kwaakaita paanodonha kubva pane imwe yemotokari pazasi.
Anonyemwerera achidzika nemota yake. 📷: empireboiz
Melinda Gates Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Melinda Gates Hupenyu Hupenyu, heano zvimwe zvisinganyatso-kuzivikanwa chokwadi zvingakubatsira iwe kuti uzwisise zvizere nezveBiography yake.
Chokwadi # 1: Forbes Rating:
Mushure memubhadharo wakawanda uye nhamburiko dzekuvandudza hutano hwevakadzi pasi rose, Melinda akaverengerwa semukadzi wechitanhatu ane simba zvakanyanya pasi pano naForbes. Kunyange zvichinzwika sezvazvinonzwika, hwaro hwaMelinda hwakakonzera kudzikira kwemakumi mashanu neshanu mukufa kwevakadzi muEthiopia makore makumi matatu apfuura.
Chokwadi # 2: Mabasa Ekutanga Ekutanga:
Melinda Gates akafumura mune imwe yemubvunzurudzo yake yaanowanzo kumuka na6: 30. Anopedza awa rekutanga remangwanani achicherechedza nguva yake akanyarara. Achangofungisisa, Melinda anoita imwe yekutambanudza, yoga, uye nekuverenga pamweya.
Chokwadi # 3: Nezve Gates Foundation:
Zvinokufadza kuziva kuti mukadzi wedu ane bhirionea ane mukurumbira uye nemurume wake vakapa mipiro yakawanda mukuvandudza mararamiro evazhinji. Melinda akafamba nenyika dzakasiyana dzepasi kubatsira vanhu vasina rombo. Tarisa uone pamufananidzo wake naBill Gates pane imwe yemapaiti avo erudo.
Ivo vakatsigira uye nekuchengetedza hupenyu hwakawanda muAfrica. 📷: pinterest
Chokwadi # 4: Chitendero:
Melinda Gates muKristu uye akaberekerwa mumhuri yekatorike. Anogaro ramba kuita kunze kwekuziva kwechinamato chake chechinamato. Pane imwe nguva, Melinda akati;
"Ndiri kurarama kutenda kwangu kuita".
Dzimwe nguva mukutsvaga, chinangwa chako chingave kuwana nekukurumidza uye nepfupi ruzivo. Yedu Wiki Tafura iri pazasi inopfupisa Melinda Gates 'Biography. Tsvaga pazasi;
Zita rizere Melinda Ann Gates
Zita reNick Melinda Gates
Akazvarwa 15th August 1964
Baba Raymond Joseph French Jr.
Amai Elaine Agnes Amerland
Vanun'una Vatatu Vanun'una; imwe hanzvadzi yechikuru uye vakoma vadiki
murume Bill Gates
Children Jennifer Katharine Gates, Rory John (mwanakomana chete) Gates, uye Phoebe Adele Gates
Net Worth $ 70 bhiriyoni
urefu 1.68 m (5 ′ 6 ″)
uremu 60 kg (132 lbs)
Tinokutendai nekuverenga yeUdiki Biography vhezheni yeMelinda Gates Hupenyu Hupenyu. Zvikawanda saka, ndinokutendai nekutenda mune Zvatiri uye Zvatinoita.
Tichiri kuisa chinyorwa ichi paMelinda Gates Biography uye Nyaya Yeechidiki, vatariri vedu vanga vari pahwindo rekunyatsojeka uye nekuita zvakanaka. Nomutsa isa zvaunofunga kana kuti tibate kana ukaona chimwe chinhu chisinga tarise pane ichi chinyorwa pamusoro pake. Kana zvisiri, tiudze nemutsa zvaunofunga nezve yedu yekunyora nezve munhu wake.